Munaasbad lagu maamuusayey maalinta dhirta Soomaaliya oo ka dhacay Galkacyo & 10,000 geed tallaal oo loo qaybiyey bulshada Galkacyo – Radio Daljir
Galkacyo, Apr 17 – Munaasabad aad u ballaaran oo lagu maamuusayey maalinta dhirta Soomaaliya oo ku beegan 17-ka April ayaa maanta lagu qabtay magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug taasi oo ay ka qaybgaleen mas’uuliyiin iyo dadweyne kale oo aad u tiro badnaa.
Munaasabaddaan oo ka dhacay xarunta ururka haweenka SWC ee magaalada Galkacyo ayaa lagu weynaynayey maalinta loo aqoonsaday dhirta iyo deegaanka Soomaaliya iyadoo ka qaybgalayaashii xafladdaasi oo ay ka mid ahaayeen xubno ka socday golaha wakiillada Puntland, maamulka degmada iyo madax kaleeto ay si aan kala har lahayn uga hadleen qiimaha dhirta iyo deegaanka.
In badan 10,000 geed tallaal oo uu diyaariyey ururka SWC, ayaa lagu wareejiyey duqa magaalada Galkacyo C/raxmaan Maxamuud X Xasan, taas ooloo qaybiyey xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada Galkacyo si loo beero, waxaana lagula dardaarmay dadweynihii dhirtaasi loo qaybiyey in ay ahmiyad gaar ah siiyaan sidii dhirtaasi u tallaalmi lahayd.
Marwo Hibo Aadan Diiriye, oo ka tirsan ururka SWC oo ah urur u dhaqdhaqaaqa illaalinta dhirta iyo deegaanka isla markaan ahaa ururka soo qaban qaabiyey munaasabadda maanta ee lagu maamuusayey maalinta dhirta Soomaaliya ee Galkacyo ka dhacday, ayaa si faahfaahsan uga warrantay waxqabadkooda ku aaddan illaalinta dhirta iyo daaqa iyadoo sheegtay hawlahaasi in ay gacan ku siiso hay,adda RMSN.
Marwo Hibo, waxay sheegtay in ay muujiyeen waxqabad ballaaran ururkoodu tan iyo markii ay bilaabeen hawlahood ku aaddan illaalinta deegaanka, waxayna carabka ku dhufatay in ay jiraan waxqabadyo ay ka midyihiin sidii loo joojin lahaa jarista dhirta iyo Cawska, gubist dhuxusha, qoditaanka baraagaha macno darrada ah iyo sidoo kaleeto tallaabooyin ku saabsan aruurinta bacaha oo ay sheegtay in ay halis weyn ku yihiin dhirta, deegaanka iyo duunyadaba.
Duqa magaalada Galkacyo C/raxmaan Maxamuud Xaaji Xasan, oo munaasabadda dhirta ee maanta ka qaybgalay ayaa u mahadceliyey urura SWC ee ku wareejiyey 10,000 ee geed tallaal, waxaana uu ku dheeraaday sidii loo illaalin lahaa deegaanka, loona samayn lahaa tallaalo hor leh oo laga hirgaliyo xaafadaha magaalada Galkacyo taas oo uu duqu sheegay in ay wax badan ka tarayso bilicda iyo ba’adaba.
Sikastaba ahaatee dhammaan madaxdii iyo mas’uuliyiintii ka soo qaybgalay munaasabadda maanta ee lagu qabinayey 10,000-ka geed ee tallaalka ah ayaa sheegay kuna dheeraaday ahmiyadda iyo qiimaha dhirta iyo deegaanka, waxayna muujiyeen walwalka ay ka qabaan xaaladda haatan ka taagan deegaannada Soomaaliya ee ah daryeel la’aanta haysata deegaanka.